May 2019 Archive News | Page2| eTanitharyi
ထားဝယ်မြို့၊ ဇေယျဝတီစာသင်တိုက်၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ ၊ စာချနာယက ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တနန္ဒဝံသ၏ ဂုဏပူဇာမင်္ဂလာ ၊ ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
ယနေ့နံနက် (၀၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်မြို့၊ ဇေယျဝတီ စာသင်တိုက်တွင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ စာချနာယက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနန္ဒဝံသ၏ ဂုဏပူဇာမင်္ဂလာဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အခမ်းအနားသို့ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင် ၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ ၊ နှင့် ဧည့်ပရိသတ်များ တက်ရောက်ခဲ့ရာ အခမ်းအနားကို နမောတဿသုံးကြိမ်ရွတ်ဆို ဘုရားကန်တော့ ၍ “ဂုဏပူဇာမင်္ဂလာ” ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဇေယျဝတီစာသင်တိုက် ၊ နာယက ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တအရိန္ဒမ ( အဘိဓဇအဂ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့် ကျွန်းစုမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံပြည်သူများ တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ယနေ့ နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီအချိန်တွင် မြိတ်ခရိုင်၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခန်းမ၌ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ခရိုင်/ မြို့နယ် အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင် က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား ခဲ့ပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများက ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေ
မြိတ်ခရိုင်၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ တောင်ဖရူးကြိုးဝိုင်း၊ အကွက်အမှတ်(၃၆/၃၇) စီးပွားရေး(ပျဉ်းကတိုး) စိုက်ခင်း(၄၅၀)ဧကတွင် စိုက်ပျိုးထားရှိမှုအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု
မေလ၂၃ ရက်နေ့ ၊ညနေ(၅၃၀)နာရီအချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦးလှထွေးနှင့် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ များသည် မြိတ်ခရိုင်၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ တောင်ဖရူးကြိုးဝိုင်း၊ အကွက်အမှတ် (၃၆/၃၇) စီးပွားရေး(ပျဉ်းကတိုး) စိုက်ခင်း(၄၅၀)ဧကတွင် စိုက်ပျိုးထားရှိမှုအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့ ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့် တနင်္သာရီမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံ ပြည်သူများ တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ယနေ့ နေ့လယ် ၁၄:၀၀ နာရီအချိန်တွင် မြိတ်ခရိုင် ၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်ခန်းမ၌ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင် က အဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြားခဲ့ပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများက ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် လုပ်ငန်း ဆော
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့် မြိတ်မြို့နယ်ရှိ ဒေသခံ ပြည်သူများ တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ယနေ့ နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီအချိန်တွင် မြိတ်မြို့နယ်၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်ကွက်၊ ပုလဲရတနာခန်းမ၌ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင် က အဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြားခဲ့ပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများက ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် မြိတ်ခရိုင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင်သည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ မေလ(၂၂)ရက်က မြိတ်ခရိုင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ များနှင့် ပုလောမြို့နယ်ဒေသခံပြည်သူများ တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်းနှင့် မြိတ်မြို့နယ်ရှိ တံတား တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခြင်း
ယနေ့ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ပုလောမြို့နယ်ခန်းမ၌ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့် ဌာန ဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ နှင့် ဒေသခံပြည်သူများ တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင် က အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားခဲ့ပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများက ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်အား ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ထိုင်းနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ယနေ့၊ နေ့လယ်(၁၄:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ(၁) ၌၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင်၊ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး တို့သည် ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ထိုင်းနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs.
မျှတသောတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ လက်စွဲစာအုပ်မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနား ထားဝယ်မြို့၌ ကျင်းပ
ယနေ့နံနက် ၀၈:၃၀ နာရီအချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ထားဝယ်မြို့ ၊ Diamond Crown Hotel ခန်းမ၌ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် UNDP တို့ပူးပေါင်း၍ မျှတသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ လက်စွဲစာအုပ်မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင် ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေး ၊ တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးတင်အောင်၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ ဥပဒေချုပ် ဦးစိုးမြင့်၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ယုယုခင်နှင့်အဖွဲ့ ၊ (Unite
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးအဖွဲ့အစည်းအဝေးခန်းမ(၂)၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ဆောင်ချက်များအား ရှင်းလင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
ယနေ့ နံနက်(၁၁:၀၀)နာရီအချိန် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ဧည့်တွေ့ခန်းမ(၂) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အခမ်းအနားသို့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင်၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးနှင့်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးဟိုပင်၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ကျော်၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများ၊ လောကအလင်း လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများ ၊ (ထားဝယ်၊ မြိတ်၊ ကော့သောင်း)မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။